Njalo wesifazane ufuna ukubheka abancane enhle njalo, kodwa hhayi wonke umuntu isikhathi esanele kanye nethuba unakekele ngokubukeka kwabo ezingeni okhokhelwayo. Kungenxa yalesi futhi kukhona ubuhle salon ezinikeza iqoqo ezivumela nawe nganoma yisiphi isikhathi ukuletha ukubukeka kwakhe ukuze uyigcine ezingeni elifanele.
Ezweni lanamuhla, lapho umuntu ngamunye abe izinto kwezigidi ezingu nsuku zonke, ubuhle nokucwala ngiye ngazuza wokuphuthuma ekhethekile - abavumela ukuba ubukeke enkulu ngisho nalapho awunawo isikhathi kuwo. Futhi ngenxa ezihlukahlukene nokucwala Ngokuvamile kunzima ukuthi akhethe noma iyiphi enye.
Kulesi sihloko uzothola ulwazi mayelana Beauty nokucwala Nuvo, okuyizinto phakathi ethandwa kakhulu futhi best eMoscow. Yini nezinqubo zikhona yini etholakalayo izivakashi? Yiziphi amanani yalezi izinqubo? Njengoba abasebenzisi bancome nokucwala amasevisi anikezwa khona? Yilokhu manje bazi, lapho ufunda ngobuhle Nuvo.
Ngaphambi kokucabangela ngqo nohlelo olusebenzisayo nokuthi ungathola khona, kudingeka wazi kahle lapho Nuvo ubuhle salon. omunye nokucwala edume kakhulu futhi avakashelwa esisogwini Michurinsk lo lemininingwane, kodwa eqinisweni kunabaningi. Iqiniso ukuthi is a full ubuhle salon inethiwekhi, okuyinto njengamanje siqukethe izikhungo ezinhlanu. Ezintathu kuzo, kuhlanganise eyodwa okungukuthi ku Michurinsk lo lemininingwane, esisogwini indawo eMoscow.
Kodwa kukhona indawo ngaphandle kwenhloko-dolobha yaseRussia. Futhi ungathola omunye Nuvo ubuhle salon e Domodedovo, in the "shopping esifundeni" shopping centre. Nokho, endlwaneni eyakhiwe yokugcina sinendawo kunalokho ezingalindelekile - itholakala e Samara, in the "Kuqondile" shopping centre.
Awu, manje wazi kahle lapho udinga ukuya ukufika omunye izikhungo okuqondene inethiwekhi. Manje sekuyisikhathi sokuba uthole ukuthi siyini, fast kanjani futhi kangakanani ungathola ngaphandle.
Haircut futhi isitayela
Beauty Salon Nuvo ukunikela ehlukahlukene yasakazwa amasevisi emkhakheni wobuhle, kusukela eyisisekelo kunazo ukuze eziphambili kakhulu. Into elula ungathola lapha - kungcono ukugunda izinwele kanye isitayela. Ezimweni eziningi, kufanele uchithe ihora kusukela ama-ruble ayizigidi 500. Uma nje ufuna sika noma usike esiphongweni whiskey, uzodinga ukukhokhela ruble mayelana 300 bachitha isigamu sehora. Njengoba for isitayela ke, kuye ngokuthi indlela, uzodinga ukunikeza ruble 500 2000 I-esifushane, ruble 800 kuya 2500 kokuphakathi kusukela 1000 kusiya ku 3500 ukuze izinwele ezinde. Kungaba lisukela imizuzu amahlanu ingxenye yehora. Yiqiniso, ubuhle Nuvo sipho akugcini nje ukusika nezinsiza isitayela.
Uma sikhuluma izinwele, ungase futhi ukuba bangagcini nje sika nendawo, kodwa futhi ukupenda. Kuye izinga upende, ungakwazi ukukhokha kuphi engama-ruble angu imidwebo ejwayelekile 800 kwabangu-4000. Ngokwemvelo, kunezinye amasevisi kufanele ukuba unake. Ngokwesibonelo, ungakwazi oda tinting, ukugqamisa, shatush, blondinirovanie, Umbala, pickling, ngisho staining keratinirovanie futhi yi-keratin. Ngokuvamile, uma ufuna unakekele izinwele zakho, khona-ke kufanele nakanjani sibheke elinye nokucwala of Nuvo, ngoba lapha ungakhetha kusukela uhlu omkhulu kwalawo masevisi ukuthi isidingo kakhulu.
Akekho kubo angadingi ukuba amahora angaphezu kwamabili noma ezimbili nengxenye, futhi isevisi ezibizayo kakhulu lonke uhlu - siqokomisa ezinde, kuyokulahlekisela ruble 4.400. Uma wayefisa, ungakwazi ngaso sonke isikhathi hlola ukuthi ochwepheshe umsebenzi emele abakhethiwe Nuvo Beauty Salon - izithombe ayatholakala kwi-website esemthethweni inkampani, lapho ungase ukwazi ukusebenzisa i-aphoyintimenti ukhululekile inthanethi.
Ukuzimonyonga ukulungisa izinzipho zezandla nezezinyawo
Enough mayelana izinwele - sekuyisikhathi ukhulume amanye amasevisi adingwa imizimba yethu. Ngokwesibonelo, nail ukunakekelwa uyisidingo empilweni yonke sowesifazane, futhi uma ukhetha ukukwenza ekhaya, ungachitha lokhu isikhathi esiningi.
Uma ngabe le akukuniki injabulo enkulu, kuzomele uxhumane salon ubuhle - kuzoba izinzipho zakho kulesi simo, lapho kuphela baphupha. Kukhona ungakwazi oda hhayi kuphela abavamile manicure izinzipho, kodwa futhi ezihlukahlukene kakhulu futhi engavamile amasevisi ifomu ukulungiswa sula, nail design, upharafini, alimondi noma ulwandle ukulungisa izinzipho zezandla nezezinyawo, nail izandiso, ukunqunywa nokususwa izinzipho yokufakelwa nokunye okuningi.
Uma ufuna ukuqondiswa amanani, le manicure zakudala kuyokulahlekisela ruble 450-550 futhi kuzophothulwa ngaphakathi ihora elilodwa. Uma ukhuluma ngezilonda izinqubo eziyinkimbinkimbi ngokwengeziwe futhi ezinde, izinzipho, isibonelo, ngeke ukhokhe ruble 2000-2500, futhi kuzothatha amahora angaba mabili nesigamu.
Esinye isici ubuhle isifazane - izinwele ukususwa, futhi ukukwenza ekhaya ngokuvamile kubuhlungu ngempela. Uma ucele le sevisi e salon ubuhle, ungakwazi depilate isitho ngasinye somzimba eceleni, noma oda isevisi olunzulu. Lowo eshibhe kubiza depilation ubuso zone - ruble 300 kuphela. Eqolo depilation - bikini, esimweni ezijulile intengo depilation inyuka ruble kuze kube 1,500, futhi isikhathi esingaphezudlwana kwehora.
Cosmetology futhi ukubhucungwa
Futhi-ke, ungakhohlwa mayelana nezinqubo yezimonyo, kanye massage. Kule ndawo, a salon ubuhle inganikeza okunhlobonhlobo kwezinsizakalo ezehluka: kusukela banal kuya yokuhlanza ibhukwana ikhasi zamakhemikhali, kusukela massage eziphumulele ukuze krioobertyvaniya.
Abasebenzisi asebethole kwadingeka isikhathi uvakashele enye yalezi nokucwala, shiya kuwebhu okubuyayo kakhulu. Zikukhombisa hhayi kuphela ngekhwalithi yemisebenzi enikelwa, kodwa futhi lula ukuqopha, nobungane nobuchwepheshe bale abasebenzi okunethezekile futhi endaweni ekahle. Beauty Salon Nuvo Michurinsky Izibuyekezo ukuchaza efudumele kakhulu.
Umuthi 'Alora ": yokusetshenziswa futhi impendulo
Le nganekwane of Archimedes kanye Biography emfushane usosayensi